गर्भवती अवस्थामा यी फलफूल नखानुहोस् | Makalukhabar.com
गर्भवती अवस्थामा यी फलफूल नखानुहोस्
फागुन २९ । गर्भवती हुनु अर्थात एउटा महिला आमा बन्न लाग्नु भनेको सबै भन्दा सुखको क्षण हो । आमा बन्नु एउटा सौभाग्य हो जब एउटा महिला आमा बन्छे तब उनी सम्पूर्ण रुपले आफू भरीपूर्ण भएको पाउँछे । गर्भवती महिलाले विशेष आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यो अवस्था भनेको महिलाको लागि एकदम नाजुक अवस्था हो ।
त्यसकारण यो अवस्थामा महिलाले बढी तनाव लिनु हुँदैन, गह्रौ काम गर्नु हुँदैन, नकरात्मक सोच राख्नु हुँदैन सके सम्म आफूलाई खुसी राख्ने कोशिस गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलाले आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल गर्नुको साथै खानपानमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । गर्भावस्थामा तपाईंको प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास ल्याइदिन्छ जसका कारण तपाईं र तपाईंको बच्चा ब्याक्टेरिया र भाइरसले सजिलै आक्रमण गर्न सक्छन् । गर्भावस्थामा केही यस्ता खानेकुरा छन् जसलाई खानबाट बच्नुपर्छ । आफ्नो बच्चा स्वस्थ र सुन्दर होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने गर्भावस्थामा यी तल दिईएको खानेकुरा खानु हुँदैन ।
‘सिके राउत र विप्लब एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्, जनमत संग्रह हुन सक्दैन’
गर्मीमा चर्को घामबाट आफ्नो छालाको यसरी सुरक्षा गर्नुहोस
जेठ ९ । गर्मी सुरु भएसँगै धेरै मानिसमा चिन्ता हुन्छ कि यस्तो गर्मीमा आफ्नो छालकाे सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर । मानिसले गर्मी भएता पनि आफ्नो दैनिकी जिवन चलाउन घरबाहिर जानु पर्ने हुन्छ । यसरी केही सावधानी नअपनाई टन्टनापुर घाममा बाहिर निस्किँन्दा हाम्रो शरिरकोछालामा घामलेछिटो प्रभाव पार्छ । गर्मी मौसममा... जारी राख्नुहोस...
नोबेल अस्पतालद्वारा नर्सिङ्ग संघलाई ३० लाखको जग्गा प्रदान (भिडियोसहित)
बिराटनगर, ८ जेठ । नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा.सुनिल शर्मा दम्पतीले नेपाल नर्सिङ्ग संघ मोरङको भवन निर्माणका लागि करिव ३० लाख मुल्य बरावरको जग्गा निःशुल्क प्रदान गरेका छन् । बिराटनगरको कञ्चनबारी स्थित नोबेल अस्पताल परिषरमा रहेको १० धुर जग्गा नर्सिङ्ग संघलाई प्रदान गरिएको हो । सोहि जग्गामा नर्स... जारी राख्नुहोस...
जेठ ८, काठमाडाैँ । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड र नोबेल हस्पिटल, काठमाडौंबीच स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार गराउँदा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस बैंकका कर्मचारी, बैंकका डेबिट एवं क्रेडिट कार्डवाहक तथा बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग तथा उनका परिवार र आफन्तलाई नोबेल हस्पिटलमा उपचार गराउँदा विभिन्न सेवा... जारी राख्नुहोस...
गर्भवती महिलाले यी खानेकुरा खाँदा गर्भ तुहिन सक्ने
जेठ ८ । एउटा महिला गर्भवती हुनु भनेको आमा बन्न लाग्नु हो । जब एउटा महिला विवाहपछी आमा बनछिन् तव उनको जिवन पूर्ण हुन्छ । एउटा महिलाले जव गर्भधारण गर्छिन् उनले आफ्नो स्वास्थ्यबारे धेरै कुुरामा ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ । एउटा महिलाले अरुबेला भन्दा गर्भवतीको समयमा खाने कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्... जारी राख्नुहोस...
यौन सम्पर्कबाट सर्ने यी खतरनाक रोग जुन अहिले व्यापक छ
१. नाइसेरिया मेनिन्जाइटिसः नाइसेरिया मेनिन्जाइटिसलाई मेनिन्गोकसको नामले पनि चिनिन्छ । यो ब्याक्टेरियाले दिमाग र मेरुदण्डको हड्डीलाई संक्रमण गर्नसक्छ । तर यो यूरोजेनिटल संक्रमणका लागि परिचित छ । ७० को दशकमा भएको अध्ययन अनुसार चिम्पान्जीको नाक र गला हुँदै यो ब्याक्टेरिया यौनाङ्गसम्म पुगेको थियो जसला... जारी राख्नुहोस...
जेठ ७, काठमाडौं । ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानले नर्सहरुको पेसागत सुरक्षा र अधिकारको लागि अन्याय र अत्याचारकाबिरुद्ध सत्याग्रहमा रहेका नर्सद्धय जीता बराल र डिकी शेर्पाको जीवन रक्षाको लागि सरकारसँग अपिल गरेको छ । नर्सद्धय बराल र शेर्पा भक्तपुरस्थित् शहिद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रम... जारी राख्नुहोस...
मैदाबाट बनेको परिकार खाँदा मिठो तर स्वास्थ्यलाई गर्छ हैँ ! धेरै हानी
जेठ ७ । हाम्रो दैनिकी जिवनमा मैदाको धेरै प्रयोग हुँदै आईरहेको हुन्छ । मैदाबाट बिभिन्न परिकारहरु बन्दछ र यी परिकारहरुलाई हामी निकै मिठो मानि खाँदै आईरहेका छौँ । यसबाट बनेको परिकार खानलाई मिठो भए पनि यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई निकै हानि पुर्याई रहेको हुन्छ । मैदाबाट बनेका खानेकुरा खाँदा स्वास्थ्यलाई फा... जारी राख्नुहोस...
नोबेलका प्रबन्ध निर्देशक इन्दिरा शर्मा सम्मानित
जेठ ७, विराटनगर । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै नोबेल शिक्षण अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक इन्दिरा शर्मालाई सम्मान गरिएको छ । सुनसरीको दुहवी स्थित फरवार्ड कम्यूनिटि माईक्रो फाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेडले छैठौँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर प्रबन्ध निर्देशक शर्मालाई सम्मान गरेको हो... जारी राख्नुहोस...
गर्मीमा अनुहारलाई यसरी ताजा र चम्किलो बनाउँनुहोस्
जेठ ६ । अनुहार यस्तो चिज हो जहाँ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । हामीले जाडोमा जसरी अनुहारको हेरचाह गछौँ गर्मीमा पनी त्यसैगरी हेरचाह गर्नुपर्नेहुन्छ । अझ जाडोमा भन्दा गर्मीमा अनुहारको हेरचाह बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । दिनभरीको धुलोधुँवा,दिनभरीको कामको भागदाैडले हाम्रो अनुहारको चमक र ताजकीपन नै हराई दिन्छ... जारी राख्नुहोस...